DIFAACA BADDA SOOMAALIYA
SOMALITALK - DIFAACADA BADDA SOOMAALIYA
Sheikh Shariif oo Imanaya Maraykanka xilli ay dhici karto in UN ay Goaan ka Gaaraan heshiiskii Isfahamka ee Kenya-Somalia
SomaliTalk.com | Sept 10, 2009
UN: Go’aankii Baarlamaanku waa go’aan Soomaaliyeed
UN: Go’aanada ka soo baxa guddiga xadaynta badaha waa go’aana aan rafcaan laga qaadan Karin
Warbaahinta: Norway waxay Kenya siisay $200 million si uu u hirgalo heshiiska isfaham ee Somalia-Kenya
Sheikh Shariif oo Imanaya Maraykanka, Xilli laga yaabo in Qarammada Midoobay go’aan ka gaaraan Dukumiintihii ay Kenya u gudbsatey UN ee la xiriirta heshiiskii Is-fahamka…
Sheikh Shariif Soomaalida deggan Maraykaanka ma u sharxi doonaa sababta xukuumaddiisa ku kalliftay in heshiis aan wax dan ahi ugu jirin shacabka Soomaaliyeed ay la galaan Kenya…
COLUMBUS, Ohio: Cilmi Ducaale, oo ah safiirka Soomaalida u fadhiya Qarammada Midoobay, ayaa hay’adda wararka ee AP waxa uu Arbacadii (Sept 9, 2009) u sheegay in Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu doonayo in uu booqasho ugu tago Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan Minneapolis, Columbus iyo cirifka Washington DC. Warku waxa uu intaas ku daray in madaxweynaha DFKMG uu ka qayb geli doono shirka Qarammada Midoobay dhammaadka bisha September 2009. Sidaas waxaa werisey jariidadda StarTribune ee ka soo baxda Minneapolis.
Waxaa in dhoweyd xarunta UN-ta ee New York ka socdey kulan kale oo lagu falanqaynayo dukumiintiyadii iyo akhbaartii ay dalalka xeebaha leh u gudbiyeen guddiga xadaynta badaha ee Qarammada Midoobay. Kulankaas oo soo bilowday August 10 ilaa September 11, 2009. Shirkaas oo albaabadu u xiran yihiin.
Sarkaal ka tirsan Qarammada Midoobay oo wax laga weydiiyey kulanka guddiga xadaynta badaha ayaa sheegay in go’aanada ka soo baxa ay noqon doonaan “go’aan aan rafcaan laga qaadan Karin.” Arrintaas oo walaac ku abuureysa shacabka Soomaaliyeed.
Dhanka kale Afhayeen u hadashay xafiiska Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay ayaa tibaaxday in go’aankii baarlamaanka DFKMG ay ku diideen heshiiskii is-fahamku uu yahay “go’aanka Soomaaliya” oo arrimaha gudaha ee Soomaaliya aysan faragashanayn.
Dhanka kale shabakad xarunteedu tahay Maraykanka ayaa sheegtay in Dalka Norway ay lacag dhan laba boqol oo million ($200 million oo doolar) siisay Kenya si uu u hirgalo heshiiska isfahamka ee ay la gashay Soomaaliya (hoos ka akhri warkaas).
Agoosto 1, 2009 ayey ahayd markii 334 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka DFKMG ay u codeeyeen diidmaha heshiiska is-faham ee Soomaaliya-Kenya.
Warar SomaliTalk heshay waxay tibaaxayaan in Afhayeenka golaha Barlamanka DFKMG Sheekh Aadan Maxmed Nuur (Aaden Madoobe) uu xeerkii ay baarlamaanku ku diidey heshiiskaas si rasmi ah ugu gudbiyey madaxweynaha DFKMG Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Sidaasna uu ku noqonayo Qaanuur ama Xeer rasmi ah. Laakiin ilaa hadda (September 10, 2009) ma jiraan wax muujinaya in xukuumaddu ay xeerkaas u gudbisay Qarammada Midoobay, ugu yaraan arrintaas weli laguma daabacin shabakada UN-ta.
Akhristuhu si uu u fahmo sidii degdegga ahayd ee xukuumadda Sheikh Shariif ay ku fulisay heshiiska is-faham: Febraayo 22, 2009 ayaa la dhaariyey xukuumadda FKMG. March 10 waxaa Nairobi ka dhacay kulan dhex maray xubno xukuumadda ah, UN iyo Norway, kulankaas ayaa xukuumadda loogu soo bandhigay qorshaha heshiiska. March 12 ayaa la sheegay in xubno ka tirsan golaha wasiiradda DFKMG ay ansixiyeen heshiiskaas. March 18 waxaa Nairobi heshiis ku kala saxiixday Wasiirka Maaliyadda DFKMG Shariif Xasan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, heshiiskaas oo kusaabsan in cashuurta alaabta aadeysa Soomaaliya in ay Kenya cashuurta uga qaado DFKMG. April 5-6 ayaa wafti reer Norway ay yimaadeen Muqdisho safarkooduna uu la xiriirey arrinta badda. April 7 ayaa Nairobi lagu saxiixay heshiiska Is-fahamka. April 8 ayaa ra’iisul wasaaraha DFKMG waxa uu warqad lifaaq ah ku daray heshiiska una diray UN-ta. April 14 ayaa si rasmi ah heshiiskaas lagu daabacay shabakada Qarammada Midoobay.
Taas barbardhig in Baarlamaanka DFKMG ay diideen heshiiskaas August 1, 2009 ilaa haddana aysan xukuumaddu ficil ka qaadan, ama muujin ficilka ay qaadatay. Lama sheegin sababta ay taasi ku dhacday.
Waa jawaabaha ay Jaaliyadda Minneapolis, Columbus iyo Washington DC ka sugayaan Sheikh Shariif marka uu booqashada ku tago Maraykanka.
Qarammada Midoobay Lugta ay ku leedahay Heshiiska isfahaka ee Soomaaliya-Kenya.
UNITED NATIONS (FinalCall.com) Sept 7, 2009– Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Axmed Walad Cabdalla, kama jawaabin su’aalo ay weriyaal ka weydiiyeen lugta uu ku leeyahay diyaarintii/qorista 15-ka bog ee heshiiskii is-afgaradka “Memorandum of Understanding (MOA)” kaas oo Kenya siinayey xuquuqda batrool kaqodista Qalfoofka Qaaradda ee Soomaaliya, oo la kordhinayo 200 miles. Sidaas waxaa qoraalka ku bilawday shabakada FinalCall oo xarunteedu tahay magaalada Chicago ee Dalka Maraykanka.
Qaar kamid ah dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Nairobi ay Qarammada Midoobay ka dalbatay in loo kordhiyo xuduudkeeda badda, ayadoo ku andacoonaysa qayb weyn oo ah qalfoodka qaaradda (oo ah dhulka badda hore u sii gashan) arrintaas oo raad ku yelanaysa xuquuqda qoditaanka macdanta laga filayo gobolkaas.
Warbaahintu waxay Walad Cabdalla weydiisay haddii ay taasi ahayd dano iska hor imanaya (conflict of interest) in Qarammada Midoobay qudheedu ku lug yeelato in ay Soomaalida ku caawiso la macaamilka Dawladda Norway si ay u bixiso kharashka lagu xareeyay diiwaan gelinta heshiiska MOA; iyo haddii ka qayb qaadashadiisa (Walad Cabdalla) ay tahay dano iska hor imaanaya.
Walad Cabdalla waxa uu yiri waxaa su’aalaha oo dhan la weydiin karaa xafiiska Qarammada Midoobay u qaabislan horumarinta ee UNDP (UN Development Program). Ilaa maanta ma jirto cid ka socota UNDP oo ka soo jawabtay su’aalahii weriyaasha; sidoo kale ma jirto saraakiil ka saraysa oo ka soo jawaabtay su’aalahaas. Afhayeen u hadlan Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay Ban Ki-Moon ayaa shabakada Final Call u sharxay in ergeyga gaarka ah uu xaqiiqo ahaan bixiyey jawaab ku filan.
Cidda keliya ee jawaabtay waa Dawladda Norway, oo adeegsanaysa wakiilkeeda Qarammada Midoobay, ayadoo sheegtay in caawinaadii ay Soomaaliya ka caawiyeen xeraynta/diyaarinta dukumiintiga, in ay ahayd arin ay sameeyeen si ay u caawiyaan dhawr dal oo Afrikaan ah, laakiin waxay (Norway) diidey in ay sheegaan kuwa ay yihiin dalalka kale ee ay caawiyeen. Norway waa dalka toddobaad ee adduunku ugu badan sahaminta batroolka.
Gerald Lemelle oo ah madaxa Africa Action, oo ah urur xaruntiisu tahay Washington DC waxa uu shabakadda FinalCall u sheegay: in waxa aan ku arkayno Qarammada Midoona ay yihiin hab-fikir “taariikhi ah” oo reer Galbeed oo ah sidii xiriir loola samaysan lahaa Afrika kaddib Gumaysigii.
“Dalalka sida Norway waxay rabeen in ay helaan sidii ay usii wadi lahaayeen in ay xukumaan khayraadka Afrikaanka, sidaas daraadeed waxay adeegsadeen Xeerarka ama Qaraarka Golaha Ammaanka, iyo Afrikaan maqaar saar ah sida Kenya (waxaa lagu soo waramay in Norway ay $200 million oo doolar siisay Kenya oo ay ka siisay heshiiskii is-fahamka MOA,)” ayuu yiri, isagoo intaas ku daray “arrinta ubucda u ah ku lug yeelashada reer galbeedka ee Soomaaliya, taas oo ah garoonka siyaasadda-iyo-dhulka, waa ku dagaalanka batroolkeeda,” ayuu yiri Mr. Lemelle.
Waxa uu yiri waqtigaan oo ay jirto arrin waadax ah, waxay awoodaha reer galbeedku adeegsanayaan Dawladda Federaalka Kumeelgaarka ah ee taageerada ka haysata Qarammada Midoobay, “dawladdaas oo aan wax sharci ah u haysan” Soomaaliya si ay u samayso tartan shirkadaha waaweyn ee batroolka.
Dawladdii kumeelgaarka ahayd waxay sannadkii 2005 ku dhawaaqday in ay bixinayso qandaraasyo ku saabsan xuquuqda batrool, gaaska iyo macdanta; oo aan ahayd sahamin oo keliya balse ay sii dheertahay suuq geyn. Si kastaba ha ahaatee, hoggaankii xukuumadaas waxaa sannadkii 2007 bedelay Maraykanka iyo Qarammada Midoobay.
Maamulka cusub ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed waqti badan oo aan soo wareegin ayey heshiis jaalnimo la galeen Kuwait iyo Indonesia; sida laga soo xigtay International Oil & Gas News.
Dadka wax falanqeeya sida Sacdiya Aaden (Sadia Aden) oo ka tirsan hay’ad xuquuqda u dooda oo xarunteedu tahay Virginia iyo Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar, oo bare ka ah Jaamacadda Minnesota (ee dalka Maraykaanka), waxay sheegeen in Qarammada Midoobay ay ka qayb qaadatay in ay dalalka reer galbeedka u horkacdo sidii ay u xakumi lahaayeen khayraadka Soomaalida. Maraakiibta shisheeye ee xeebaha Soomaaliya ka waardiyaynaya burcad badeeda xaqiiqo ahaan waxay halkaas u joogaan in ay sahansadaan khayraadka Soomaaliya, gaar ahaan kaydka batroolka iyo gaaska dabiiciga ah; waxayna ogolaanshada ka haystaan Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay, sidaas waxaa Final Call u sheegtay Sacdiya Aaden.
“Soomaalidu waa ogyihiin in maraakiibtaasi aysan u iman in ay ugaarsadaan oo dacwad ku ogaan burcad badeeda, laakiin ay u yimaadeen in ay qaybsadaan badda Soomaaliya, iyo in ay difaacaan danahooda ayagoo rajaynaya in ay kala qaybsadaan khayraadka – ma aha oo keliya dhanka badda , balse sidoo kale xagga dhulka,” ayey Sacdiya Aaden hadalkeeda ku dartay.
Prof. Samatar waxa uu Final Call u sheegay in Heshiiska Isfahamka ee MOA uu Muqdisho ka abuuray caro lagaga soo horjeedo; waxaana baarlamaanka Soomaaliya ay si aqlabiyad buuxda ah ugu codeeyeen diidmada heshiiskaas. “Tani ma aha dawlad sax ah, sidaas daraadeed ma laha awood hab-maamul oo ay ku dhaqan geliyaan ama ku galaan heshiisyo,” ayaa profosoorku ku adkaystay.
Prof. Samatar waxa uu yiri DFKMG waxay Kenya iyo reer galbeedka taageersan ugu qoordhiibanaysaa waa ayada oo aan haysan kharash lacageed; sidaas daraadeed dawlada kumeelgaarka ahi maleh awood ay ku difaacdo danaha dadka Soomaaliyeed.
Dadka ka faallooda shirkadaha batroolka waxay sanadihii 1980-naadkii sheegi jireen in ay jiraan cadaymo muujinayey in batroolka Yemen oo la sii marayo Badda Cas in uu gaarsiisan yahay Soomaaliya. Ka hor intii aan xukunka laga tuurin Siyaad Barre sannadkii 1991, waxaa tobanaan million oo doolar lagu maal-geliyay ceelasha laga baarayey batroolka ee Soomaaliya, shirkadda ugu badnayd waxay ahayd CONOCO oo xarunteedu taahy Texas.
Hay’adda dalka Maraykanka u qaabilsan Akhbaarta Tamarta waxay ku warbixisay in khubaro badan oo xagga batroolka ay Soomaaliya u tixgaliyaan dalka ugu dambeeya ee “Dahabka Madow” (batroolka) ee Bariga Afrika; ma jiraan cadayn la rumaysan karo oo muujinaysa in batrool badaani ku jiro; laakiin waxaa jira baaxad weyn oo ah gaaska dabiiciga ah.
Warbixin ay sannadkii 2004 diyaarisay “HAN DATA & Information Background” oo ku saabsanaa “Macdanta iyo Batroolka Soomaaliya ee istaatiijiga ah” ayaa lagu xusay in Soomaaliya oo ah dal ku yaal Geeska Afrika ay ku jiraan macdanaha ay ka mid yihiin copper, gold, zinc and silver, oo ay ku jirto iron-ore, bauxite iyo gypsum.
Sida laga soo xigtay Mr. Lemelle Qarammada Midoobay waxay maqlaysay ururro u ololeeya danaha Afrika (pro-African) sida Africa Action oo sheegayey in UN-tu ay dhul baaxad weyn oo Afrika ah ay siinayso shirkado caalami ah oo ka socda dalal kala duwan; taas oo Qarammada Midoobay ay garab siinaysay qandaraasyo mugdi ku jiro oo lagu bixinayo khayraadka Afrikaanka. “Waxaan doonaynaa in aan ogaano yaa ansixiyay qandaraasyadaas,” ayuu yiri Mr. Lemelle.
Cabirkii Qalfoofka Qaaradda ee Soomaaliya ee Baarlamaanku diiday waxa uu waji gabax ku noqday Norway, sida ay qirtay Qarammada Midoobay.
Sidaas waxaa qoraal ku bilowday Inner City Press oo ka hawl gasha xarunta Qarammada Midoobay ee New York.. Waana kan qoraalkii shabakada oo ay SomaliTalk.com tarjumtey:
UNITED NATIONS, (InnerCityPress.com), August 31, 2009 — Baarlamaanka Soomaaliya waxay dhowaan u codeeyeen in ka badan boqolkiiba 90% in ay ka soo horjeedaan heshiiska uu dhexdhexaadiyaha ka ahaa ergeyga gaarka ah ee Qarammada Midoobay Axmed Walad Cabdalla, asagoo adeegsanaya kaalmada Norway, si Kenya iyo Soomaaliya ay wadajir u gudbiyaan arrin ku saabsan xuquuqda dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin qalfoofka qaaradda (ama dhulka badda hore u sii gashan) iyo baddaas khayraadka dabiiciga ah ee ku jira. Xitaa ka hor codbixintaas baarlamaanka waxaa shabakada Inner City Press ay si isbada joog ah Qarammada Midoobay u weydiisay waa maxay arrinta xuquuqda u siinaysa Walad Cabdalla in uu isku dubarido gudbinta akhbaarta (Soomaaliya u gudbisay UN-ta), wax jawaab toos ah weli ma helin.
Hadda oo xarunta Qarammada Midoobay ee New York uu ka socdo kulan ku saabsan Qalfoofka Qaaradda iyo sharciga badaha, waxa ay shabakada Inner City Press ugu dambayntii heshay qadar jawaabo ah.
Kulan ku saabsan “nidaamka badaha” oo lagu qabtay xafiiska UN-ta u qaabisan sharciga, ayaa shabada Inner City Press waxay koox khubaro oo ka tirsan Qarammada Midoobay ay weydiisay sida ay hadda ula tacaalayaan ama wax uga qabanayaan akhbaarta la diidey sida tan Soomaaliya. Markii hore khabiir ka mid ah ayaa isku deyey in uu jawaabta ka warwareego isagoo yiri waxaa la weydiin karaa oo jawaabta laga heli karaa oo keliya kulamo kale oo lagu qabanayey qol kale oo halkaas u dhawaa oo uu ka dhacayey kulan ku saabsanaa xadaynta qalfoofka qaaradda ee badaha. Laakiin kulamadaasi waxay ahaayeen kuwo albaabadu u xirnaayeen.
Peter Gilruth, oo ah madaxa hay’adda Qarammada Midoobay u qaabilsan deegaanka UNEP (UN Environment Program), qaybteeda qaabilsan digniinaha la xiriira kulaylka cimilada/degaanka, ayaa yiri: waxaan isku deyayaa in aan ka jawaabo, inkasta oo uu dareemay in arrintaas ay ku sababi karto “xaalad adag”. Waxa uu yiri: Norway waxay bixisay kharashka 10 dal oo Afrika ah si ay u gudbistaan (cabirka badahooda), laakiin Soomaaliya ayaa “qaybo kale waxa ay warka u weeciyeen jiho kale, taas oo sababtay arrinta adag ee aad tilmaantay.” Isagoo intaas ku daray “in ay jiraan su’aalo ka sahlan taas.”
Markale ayaa Inner City Press waxa ay qaabishay Mr. Gilruth waxana uu markaas ku jawaabay in akhbaarta Soomaaliya ee la gudbiyey ee jaahwareerka dhalisay “in ay waji-gabax ku noqotay dawladda Norway.”
Waxaa isaga garabkiisa joogey Patricio Bernal, oo ah agaasime xigeenta hay’adda Qarammada Midoobay ee UNESCO, isla markaasna ah xoghaynta guud ee guddiga cabirka badaha (Intergovernmental Oceanographic Commission) waxana uu yiri: waxan arrintan ka shaqaynayey toban sano, waxaan kala shaqeeyey dawlada Soomaaliya ee “dibad jooga ku ahayd” Nairobi, waxana uu sheegay in uusan fahmi karin sababta arrinta Soomaaliya ka dhigtay qodaxda/musbaarka. Waxa uu carrabka ku adkeeyey in go’aannada ka soo baxa kulanka Qalfoofka Qaaradda – ee albaabadu u xiran yihiin – in ay yihiin go’aanno “aan rafcaan lahayn” (ama rafcaan laga qaadan karin “unappealable.”).
Inner City Press oo halkaas faallo ka bixinaysay waxay qortay “Waxaa laga yaabaa in jaahwareerku uu yahay in la macaamilka dawladda Soomaaliya ee dibad jooga ah, ama DFKMG, ama Walad Cabdalla, in aysan ahayn in lala macaamalayo dadka Soomaaliyeed, mana jiraan wax dammaanad ah oo muujinaya taageero ama sharciyad.” Waxaa lagu soo waramay in Walad Cabdalla uu isku deyayo in Qabqable dagaal uu kusoo casumo in uu ku soo biiro DFKMG. Inner City Press waxay (August 24, 2009) arrintaas wax ka weydiisay afhayeen, taas oo sheegtay in jawaabta la weydiin karo Walad Cabdalla. Welina wax jawaab ah lagama hayo.
Warbixintii ay DFKMG u gudbisay Qarammada Midoobay ee ka koobnay 15-ka bog waxaa ku cad in Axmed Walad Cabdalla “uu ahaa kii bilaabay diyaarinta akhbaarta hordhaca ah ee muujinaya cabirka qalfoofka qaaradda ee Soomaaliya in ka baxsan 200 oo mayl badeed…. Diyaarinta akhbaartaas waxa Ergeyga Gaarka ah ee Xoghaya Guud ee Qarammada Midoobay uu aqbalay taageerada dawladda Norway… Wasaaradda Arrimaah dibada ee boqortooyada Norway iyo Qaybta batroolka u qaabilsan Norway ayaa ka qayb qaatay diyaarinta akhbaarta (ay Soomaaliya u gudbisay UN-ta).”
Inner City Press oo horay arrintaas wax uga qortay, waxay wax ka weydiisay Qarammada Midoobay iyo afhayeenka Walad Cabdalla, Suzie Price, laakiin ilaa hadda wax jawaab ah kama helin.
Bishii May 2009 ayaa waxaa su’aasha toos loo weydiiyay Walad Cabdalla, waxana uu ku jawaabay in uusan “khabiir gaar ahayn” iyo in uusan ka war hayn akhbaarta la gudbiyey ee ay ku cadayd in uu isagu diyaariyay. “Weydii Norway,” ayuu yiri. (Daawo Halkan )
August 24, 2009 Xafiiska Afhayeenka Xoghaya Guud ee Qarammada Midoobay ayaa wax laga weydiiyey heshiiskii is fahamka ee Soomaaliya iyo Kenya iyo lugta uu ku leeyahay Axmed Walad Cabdalla. Waxaana weriyuhu xusay in baarlamaanka Soomaaliya in uu u codeeyay diidmada heshiiskaas.
Hadaladdii ay afhayeenku ku jawaabtay waxaa ka mid ahaa: “Xaqiiqo ahaan in loo codeeyey oo la diiday dukumiintigaas waa arrin khusaysa gudaha Soomaaliya, waa arrin Soomaaliyeed, farana la geli mayno. Ka qayb qaadashada Arrintaas ee Qaramada Midoobay waxaay filayaa Axmed Walad Cabdalla isagaa hore si cad idiinku sheegay waxa ay arrintaas UN-tu ku lahayd iyo waxa uu isagu lahaa, oo arrintaas wax dheeraad ah kama dhehi karo, sababtoo ah go’aanka, go’aanka kama dambayta ah iyo arrinta baarlamaanka waa go’aan Soomaaliyeed.” (Daawo Halkan )
Markii baarlamaanku diidey heshiiskii is fahamka DFKMG iyo Kenya, kaddib ayaa British Broadcasting Corporation (BBC) waxay madaxweynha DFKMG wax ka weydiisay arrintaas, waxana jawaabtiisii ka mid ahayd “Heshiiskaas dantii laga lahaa waa laga gaaray.” Arrintaas oo shacabka Soomaaliyeed ay fahmi waayeen waxa uu erayadaas ka wadey maadaama khubaro ajaaniib iyo Soomaali ahba ay muujiyeen in heshiiskaas aysan wax dan ahi ugu jirin ummaadda Soomaaliyeed.
Haddii heshiiskaas is fahamka lagu socodsiiyo Soomaalida, markaas dhulka Soomaalidu ay waayi karaan waa dhul badeed baaxaddiisu dhan tahay 116,000 km2. Si loo fahmo baaxadda cabirkaas, waxaan tusaale u soo qaadanaynaa qiyaas cabirka bedka dhulka Soomaalida guud ahaan, sida ku qoran buugga uu qoray Khaalid Cali-Guul Warsame (2003 Denmark) oo cinwaankiisu yahay Taxanihii Taariikhda Soomaaliya, waxaa ku qoran sidan:
Bedka Dhulka Soomaalida:
Jamhuuriyadda Soomaaliya: 640,000 km2
Jamhuuriyadda Jabuuti: 23,000 km2
NFD (dhulka ku maqan Kenya): 384,000 km2
Soomaali galbeed (ku maqan Itoobiya): 416,000 km2
Jasiirada Suqadara (oo ay sheegato Yemen): 2,655 km2
Halkaas waxaad ka arki kartaa baaxadda lagu waayi karo Isfahamka Kenya iyo Soomaaliya in ay dhan tahay dhulbadeed cabirkiisu shan-jeer (5) ka weyn yahay bedka dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Sawirada: http://www.innercitypress.com , http://www.finalcall.com/ , http://ioc-unesco.org/ , http://www.unep.org/ , http://www.africaaction.org/ , http://www.startribune.com/
Xigmad: “Taariikhdu waa cibro iyo cashara waaweyn, waa kaydka waanada iyo waaya aragnimada. Dhacdooyinka maanta dhacayaa berri wexey noqdaan taariikh. Taariikhdu cidna ma duudsido, qof walbana wexey diiwaanka u gelisaa wuxuu galo iyo wuxuu gudo, booska uu istaago iyo kaalinta uu qaato Ummaddiisa ama diintiisa ama dalkiisa.” Sh. Maxamed Idris. Sept 3, 2009
Sh. Shariif oo ka gows qabsaday go’aankii Baarlamaanka” Baarlamaanka sida aad lasocotid waxa uu xaqa u leeyahay waxa ay tahay heshiis inuu buriyo,laakiin kani heshiis ma’ahayn wuxuu ahaa IS-AFGARAD”…”heshiis rasmi ah in hada ladiyaariyo ayaa loo baahan yahay”. Akhr…
Axmad Walad Cabdalla oo Muujiyay in uusan ka war hayn Akhbaarta ku Saabsan Qalfoofka Qaaradda Badda ee Soomaaliya u Gudbisay Qarammada Midoobay ee uu isagu Diyaariyay....
Faarax Qare: Calaamada Kenya iyo Soomaaliya waa Xariijin kala cad.. iyo Kenya & Soomaaliya oo Raadinaya Xallinta Muran Dhuleedka... Akhri/Daawo
Dowlada KumeelGaarka ah oo Markale Heshiiskii Nairobi Difaacday, Qirtayna in Kenya Badda Soomaaliya Kusoo Xadgudubtay Akhri/Daawo...
Kenya oo 2005 la soo Xiriirtay DFKMG ayadoo Doonaysay in ay wada hadal furaan ama sheegasho ku saabsan qayb ka mid ah Badda Soomaaliya.
Shirka Jaraa'id ee Xoghaynta Guddiga Xadaynta Badaha - oo Sheegay Hadallo Daaha ka Rogay Arrimo ay Madaxda DFKMG ku dadaalayeen in aan shacabku ogaan:
Isbarbar dhig Heshiisyadii Caruusha iyo Nairobi... Akhri..
Bayaan ay soo saareen Jaaliyadda Soomaaiyeed -Yurub
DHAXALWAREEG ( Gabay Cusub) - Eng. Cibaar
"...haddii aad tagtid Archive-ka ama Libreeriga Congress-ka Maraykanka waad heleysaa EXACTLY BEARING-ka (jihada xadku u socdo) oo ilaa inta uu qalin gaaro ku tusaysa, waa wax record-kii meesha jiro (Diiwaan). Akhri..
Barnaamij ay ka qayb qaateen Prof. Cabdi I.Samatar iyo Eng. Maxamed Cali oo ku saabsan dhul-badeedka Somalia
Dhagayso ama Soo rog
Xasan Dhooye oo faahfaahiyay Heshiiskii Kenya & Soomaaliya
Q.1aad: Dhagayso ama soo rogo
Q.2aad: Dhagayso ama soo rogo
Barnaamij ku saabsan xuduudaha badaha ee Radio Codka Beesha
ka hor daabacaadii cilmi-baarista
HESHIISKII IS AFGARAD
Heshiiskii Is Afgarad ee Kenya iyo Soomaaliya: Af-Soomaali | English Version
Waxaan ku baaqeynaa in Heshiiska badda ee dhexmaray dowladda Kenya & DFKMG loo soo bandhigo culimaa’uddiinka iyo qaanuunyahanno, kadibna baarlamaanka DFKMG.. Akhri